Wada-Hadalladii Usocdey Dowladda Somaliya Iyo Jubbaland Oo Natiijo La’aan Ku Soo Dhamaaday & Ergadii Labada Dhinac Oo Addis Ababa Ka Soo Dhoofay | Salaan Media
Wada-Hadalladii Usocdey Dowladda Somaliya Iyo Jubbaland Oo Natiijo La’aan Ku Soo Dhamaaday & Ergadii Labada Dhinac Oo Addis Ababa Ka Soo Dhoofay
Aug 27,2013 Muqdisho(SM) Wararka ka imanaya xarunta dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayaa sheegaya in ergadii ugu qeyb galeysey wada-hadallada dowladda faderaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay ka soo dhoofen magaaladda Addis Ababa,iyagoona usoo kici timey goobihi ay horey uga yimaaden.
Wada-hadalladan waxaa garwadeen ka ahaa ururka goboleedka IGAD,waxana ka qeyb galayey xubno mataley beesha caalamka,waxaa la xaqiijiyey in dhinacyaadii shirka ugu qeyb galayey IGAD iyo beesha caalamkuba ay isaga baxeen shirarka ay lahaayen ergada labada dhinac taaso la sheegey inay ka danbeeysey kadib markii ay soo lab labten balanqadyo labada dhinac ay ku balameen oo ay san ka dhabeen. Ergada uga qeyb galey wada-hadalka dhanka dowladda faderaalka Soomaaliya. Ergada uga qeyb galeysey wada-hadalka dhanka dowladda faderaalka Soomaaliya Wararku waxaa ay sheegayan in IGAD iyo beesha caalamkuba ay ku eedeyen dowladda faderaalka Soomaaliya iyo ergadii wada-hadallka uga qeybgaleysey inaysan diyaar u ahyeen in xal laga gaaro khilaafka dhexyaala dowladda iyo maamulka Jubbaland.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidaa ku buur burey wada-hadallkii aragtiyada kala duwan laga dhibanayey muddadanba,inkasto maal mihii danbe la saadaalinayey in an laga mira dhalin doonin shirka maadama ay badatey is qab qabsiga labada dhinac ee shirka ka qeyb galey.